Qasaarooyinka soo gaaraya Dowladda Qadar oo sii faafaya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Qasaarooyinka soo gaaraya Dowladda Qadar oo sii faafaya
Qasaarooyinka soo gaaraya Dowladda Qadar oo sii faafaya
Wargeyska Daily Mail ayaa soo daabacay in Geella Qatar u badanaa la daajin jiray beero ay Sacuudigu leeyihiin oo ku yaal xuduudda labada dal, dhanka Sacuudiga. Laakiin isla markii uu xiriirku labada dal xumaaday ayaa dhammaan geelii Qadar ee daaqi jiray beeraha Sacuudiga xeryaha oodda looga qaaday, laguna sii daayey saxaraha Qadar.
Waxaa la qiyaasayaa in Sacuudigu uu oodda ka qaaday geel Qadar leedahay oo kor u dhaafay 15,000 halood iyo 10,000 ido ah. Geela 9,000 (sagaal kun) oo kamid waxaa oodda looga qaaday wax ka yar 36 saac xiriir jaristii kabacdi.
Geel dhaqde magaciisu ku sheegay Xuseen Al-Maari ayaa yiri, “waxaan ka soo laabtay Sacuudiga mise tiro geela oo 100 kor u dhaafaysa oo geelaygii ahi waa dhinteen, boqolaal kale meel aan ku sheego ma aqaan, sidoo kale boqolaal ido ah gacan kuma jiraan.”
Warar laga helay dadka maraya jidka u dhexeeya labada dal waxay sheegeen in ay indhahoodu ku arkeen qaalmo yaryar oo boqolaal kor u dhaafay oo ku bakhtiyey dhinacyada laamiga. Wararka qaar ayaa iyana leh geel ka badan 150,000 neef ay weli ku jira xeryaha iyo beeraha Sacuudiga, lamana yaqaan xukunka Sacuudigu uu kuwaasna ku ridi doono.